China Model Kwete: NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina fekitori uye vatengesi | Mubatanidzwa Pamusoro
About Unite Top
Zvimedu zvesimbi baler
Vertical non-metal baler
Metal shear machine
heavy duty shear machine
simbi baler shear
Kutengesa Uye Basa
Muenzaniso Kwete: NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina
Function：NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina inonyanya kukodzera vagadziri vecarbon dioxide fire extinguishers kana mabhodhoro eokisijeni.
Kupfuurisa 25+ makore ekugadzira ruzivo, kupa customized kupfuura 3000+ anoseta zvisaririra zvesimbi zvigadziriswe zvakare.
NY Series hydraulic cylinders inopisa spinning muchina ane NY-180, NY-219, NY299 iyo mitatu yakatarwa. NY inopisa inotenderera yekuvhara muchina inogona kuvhara kushanda kwemvura mabhodhoro eokisijeni, boiler musoro pombi, chubhu uye zvimwe zvakagadziriswa kuita accumulator bottleneck flat. Kunyanya yakakodzera mugadziri wekudzima moto. Iine hydraulic clamping, hydraulic turning, yakasarudzika dhizaini, inotungamira tekinoroji.
NY Series hydraulic cylinders inopisa spinning muchina ine inoshanda bhuku uye semi-otomatiki modhi.
NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina wesimbi pombi chinhu chisina musono pombi ine imwe dhayamita uye kureba, yakaiswa muhombe shaft dhiramu. Nekudzvanya iyo hydraulic cylinder, kudzvanya, uye nekukurumidza kutenderera, musoro unopisa kusvika kune thermoplastic tembiricha, uye ipapo swing cylinder piston inogadziriswa kusundira rack kumberi, ichityaira kutenderera kwegiya, nekuda kwekutenderera kwegiya shaft, kuitira kuti kuvhara kufa pane thermoplastic simbi chubhu extrusion mune imwe chimiro chepamusoro.
NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina wekugadzira yakakwira zvakanyanya, yakakodzera kugadzirwa kwakawanda kwemidziyo yekumanikidza, senge madiki uye epakati-saizi ekudzimisa moto masilinda, marudzi ese emidziyo yekumanikidza, boiler yekuunganidza mabhokisi, etc. NY Series hydraulic cylinders inopisa kutenderera. muchina inyanzvi itsva yakagadzirwa mumakore achangopfuura. NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina inogona kuchengetedza yakawanda simbi uye simba, ndiyo yazvino kuitisa mudzimba kuita tekinoroji.
NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina wekushanda musimboti
Nekudzvanya iyo hydraulic cylinder, kudzvanya, uye nekukurumidza kutenderera, musoro unopisa kusvika kune thermoplastic tembiricha, uye ipapo swing cylinder piston inogadziriswa kusundira rack kumberi, ichityaira kutenderera kwegiya, nekuda kwekutenderera kwegiya shaft, kuitira kuti kuvhara kufa pane thermoplastic simbi chubhu extrusion mune imwe chimiro chepamusoro. Kubudirira kwekugadzira kweNY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina wakakwira zvakanyanya, uye inokodzera mabhizinesi anoburitsa chisimbiso chemidziyo yekumanikidza, boiler mabhokisi egungano uye zvimwe zvikamu muhuwandu hukuru.
Model Main axis kumhanya(r/min) Kurovera humburumbira.KN） Kuvhara nekukuya humburumbira(KN) Simba(KW)
NY-180 350-400 110 60 22
NY-219 350 180 60 37
NY-299 320 415 76 74
Yedu NY Series hydraulic cylinders inopisa spinning muchina inopa tsika ine mukurumbira mhando muchina zvikamu, tanga tichishandira pamwe nevazhinji vane mukurumbira pasi rose brand supplier, seSIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi.
Iyo yakaderera modhi NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina inogona kuchengetedzwa zvakanaka mune imwe 40 HQ mudziyo. Kana ngarava nechikepe, isu tinovhara iyo poncho uye Mutoro dhizaini kuchengetedza yedu NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina.
Tarisa NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina muAction!
Zvakapfuura: Waste Paper Baler - Model Kwete: Chinese Manufacture Automatic Control Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine yeMetal Press Recycling – Unite Pamusoro
Zvinotevera: Muenzaniso Kwete: Chinese Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine
kupisa kutenderera kuvhara muchina
nezvedu yekutengesa network taura nesu mabasa
Aluminium Foil Baler Machine, Homemade Cardboard Baler, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Y81 Hydraulic Baler, Leaf Compactor uye Baler, Zvimedu Metal Compactor,